China GREEN Tea MAOFENG fekitari uye vagadziri | Yibin Tea
mao feng akapetwa zvishoma muchimiro, senge rurimi rweshiri, nesirivha yegirini neyesirivheri inoonekwa. Uye zvakare, iyo tii inozadzwa nemashizha egoridhe ehove, ayo anodururwa mumukombe kugadzira iyo yepamusoro tii. Ruvara rwedoro rwakajeka uye rwakaita yero, uye mashizha pazasi ari yero uye girini ine simba. Iwo achangobva kugadzirwa tii mashizha ari pekoe akaputirwa mumuviri, aine anopinza mapundu uye nhongonya.
Diki roll roll, zvishoma tippy
Yakapfuma, inozorodza, inomhanya
Kutanga, maitiro echitarisiko
Huangshan Maofeng, chimiro chekapumburu kadiki, kunge rurimi rweshiri, girini muyero, mwenje wesirivheri, uye nemashizha ehove egoridhe (anowanzozivikanwa segoridhe). Maofeng ubvise mutete wakatsetseka, mutema mune zvishoma yero, ruvara mafuta shongedza yakajeka; Iwo anopinza mapundu anovhara mumashizha uye akafanana nerurimi rweshiri. Iyo bhudhi yepamusoro yeakaoma tii bud inofanirwa kufumurwa. Iyo bhudhi yepamusoro yeakaoma tii bud inofanirwa kufumurwa. Iyo bundu yepamusoro yeyakaomeswa tii bud inofanirwa kuburitswa, uye iyo bundu yepamusoro yeakaoma tii bud inofanirwa kuvanzwa uye iyo yepamusoro yepamusoro yeyakaoma tii bud inofanirwa kufumurwa. Mushure mekunge super Huangshan Maofeng ichibikwa, mabhureki nemashizha anozomiswa mumvura akatwasuka, uye zvobva zvanyura zvishoma nezvishoma, uye mabhureki anenge ave manyoro uye akapfava.
Mao Feng, zvakare inoreva kune yakasvibirira tii mune yekutanga kugadzirwa kwekuumbwa kweakaonda uye akaomarara, achizarura nyoro yakagochwa girini. Iyo yepamusoro yebvudzi inogadzirwa munzvimbo yemapepa yakatetepa uye yakasimba muchimiro, ine antler uye pamberi pebud pachena. Ruvara rwedoro rwakajeka, hwema hwacho hwakajeka, kuravira kwacho kwakanyorovera uye kunotonhorera, uye pasi pemashizha pane girini uye yakajeka. Makuru mashizha emashizha, yero yero kana yakasvibira yakasvibira muvara, gobvu mukunhuhwirira, nyoro nyoro mabhudzi pazasi pemashizha
Chechipiri, kunhonga hunhu
Huangshan Maofeng kunhonga wakanaka, nakisa Huangshan Maofeng kunhonga mureza kuti bundu uye shizha mangwanani kuratidzira, 1-3 Huangshan Mao. Chiyero chekutora cheMaofeng Mountain muHuangshan ibhuu rimwe uye shizha rimwe, uye bundu rimwe uye mashizha maviri pakutanga. Shizha rimwe, shizha rimwe, mashizha maviri; Rimwe bukira, maviri uye matatu mashizha anotanga kuzaruka. Super Huangshan Maofeng anocherwa pamberi nepashure peTomb-kutsvaira Zuva, uye 1-3 Huangshan Maofeng anocherwa pamberi uye mushure meGrain Rain. Mushure mekunge mashizha matsva aunzwa mumuti, anofanirwa kutorwa kuti abvise mashizha echando uye mashizha-ekukuvara kwezvipembenene, uye mashizha, madzinde uye michero yetii isingakwanise zvinodiwa zvinofanirwa kutorwa kuti ive nemhando yemabhudzi. uye mashizha akafanana uye akachena. Wobva wawaridza mashizha matsva ehunyoro hwakasiyana zvakasiyana kuti arasikirwe neimwe yemvura.
Kuti uchengetedze mhando uye kutsva, mangwanani anodikanwa uye masikati anodikanwa. Mumasikati neusiku. Uye zvakare, yepamusoro Huangshan Maofeng chimiro senge rurimi rweshiri, Bai Hao akafumura, ruvara senzou, shodzi dzehove dzegoridhe. Mushure mekubika, hwema hwacho hwakareba uye hwakareba, ruvara rwemuto rwakajeka, kuravira kuri kutsva uye kwakakora, kwakanyorovera uye kunotapira, pasi pemashizha ari manyoro uye yero, uye mafuta anova ruva. Pakati pavo, machena endarama uye yenyanga dzenzou ndiwo maitiro maviri ari pachena anoita chimiro cheMaofeng wepamusoro weHuangshan akasiyana nemamwe Maofeng.
Mune yepamusoro-soro Maofeng Mountain yeHuangshan, tora mashoma eakaomeswa tii mashizha padyo nemhino dzako, uye iwe uchanzwa kunhuhwirira uye kutsva, kana kuve nekunhuhwirira kwakafanana neorchid yearchid uye chestnut.
Bira iwo tii mashizha kwemaminetsi matatu kusvika mashanu, wobva wadira iyo tii mune imwe mbiya. Kana iri yakanakisa Huangshan Maofeng, ruvara rwemuto rwakajeka uye rwakajeka, girini yakajeka kana yero green, uye yakajeka asi isina makore, inonhuwirira uye yakareba.
Huangshan Maofeng inwa zvinobva kunze kwenyika, kazhinji zvinonzwa kuravira kwechitsva uye chakakora, kwete chinovava, chinotapira mushure
1, matsva mashizha ari kunhonga dumba: pamberi uye mushure meTomb Kutsvaira Zuva, tora une hutano tii muti 1 bud 1 shizha kana 1 bud 2 shizha pakutanga kwemafuta manyoro bukira mashizha, mushure maawa matanhatu kusvika gumi nemaviri akapararira girini, kudzamara shizha rarasa kupenya. , kunhuwa kunhuwirira.
2, kuuraya kukwiza: muhari yakakombama kana muhari yakati sandara, huwandu hwemashizha i500-750 gramu, chinodiwa chekupisa kwazvo, shoma, inowanzo kukangwa nekukasira, apo mvura inopisa, feni, iparadzire mhute yemvura, kudzivirira kusviba yeyero. Pedyo kusvika pakati nepakati, maoko maviri hama, mishanu kusiyanisa minwe, zvinyoronyoro kukwiza, kune izvo zvakakosha muhari, mudanga unotonhorera. Kana iyo bhaa isina kunaka, unogona kuikanya zvinyoronyoro mushure mekunge hari yatonhorera.
3, iyo yekutanga kuomesa: muchoto kana kuomesa, kudziya kwe 90-110 C, imwe neimwe keji yekubika nezve hari yemashizha egirini. Chinodikanwa yunifomu moto, isina chiutsi, bookbook inowanzo pinduka, kuomesa kune chidiki kubata kunogona kunge kuri pasi pekuomeswa, uye nenguva inowaridza mwando unotonhorera.
4. Iyo tembiricha inofanirwa kuve yakakwira uyezve yakaderera (90-60 ° C), ruoko runofanira kuve ruchireruka uye rureme uyezve rwakareruka. Kana iwo tii mashizha akaiswa chaizvo, kune madiki madiki mabhora, uye kune yakajeka tende yekunzwa. Kana angangoita makumi masere kubva muzana emashizha etii akaoma, isa muhari uye utonhorere.
5. Bika zvakare (yakaoma zvakakwana): 2 kusvika ku3 mageji emashizha uye imwe keji, iyo tembiricha inotanga kukwirira uye yozodzikira (80-60 ° C), bika kusvikira dzinde raputswa, ruoko rovhara tii inogona kunge iri hupfu zvakakodzera. Mushure mekuti tii yakakwana yaoma, winnow inopera yakapwanyika, inotonhorera kutembiricha yemukati, kurongedza bhegi zvakare (bhokisi) chengetedza kana kutengesa
Maitiro uye basa remaofeng
Maofeng ndeye green tea, rinova izwi rakajairika reti nyoro uye yakakangwa girini tii. Nzvimbo huru dzinogadzira ndeYunnan, Emei, Zunyi, Wuyi nedzimwe nzvimbo, pakati padzo dzinonyanya kuzivikanwa ndiHuangshan Maofeng mudunhu reAnhui. Uye zvakare, kune Emei Maofeng, Mengding Maofeng uye zvichingodaro. Chimiro cheMaofeng tii chine mitsetse, yakasimba uye yakatetepa, ine ruvara rweemaradhi rwegirinhi uye antler yakafumurwa, yakachena uye inogara hwema. Ruvara rwedoro rwakareruka uye rwakajeka, kuravira kwacho kwakapfava uye kunozorodza uye kunotapira, uye pasi pemashizha pane girini uye yakajeka uye yakaenzana.
1. Simbisa mano okufunga
Iyo caffeine iri muMaofen inogona kukurudzira iyo yepakati tsinga system, kugadzirisa kunonoka kwehuropi, kubvisa kuneta, kugadzirisa kugona kwebasa, asi zvakare kugadzirisa kugona kwekusimudzira kufunga, kutonga uye ndangariro.
2. Kurudzira kutenderera kweropa
Maofen inokwanisa kugadzirisa metabolism yemuviri, kukurudzira muviri kutenderera kweropa basa, kudzikisa cholesterol, kuwedzera kuomarara kwema capillaries, uye kuwedzera anticoagulation yeropa.
3. Kudzivirira kwezvirwere zvemoyo
Maofeng akapfuma tii polyphenols uye vhitamini C, iyo inogona kusimudzira kutenderera kweropa, kubvisa stasis yeropa uye kudzivirira arteriosclerosis. Kazhinji kunwa Maofeng tii kunogona kudzikisa kuitika kwehypertension uye coronary moyo chirwere.
4. Dzvinyirira cancer maseru
Iyo polyphenols yetii iri muMaofeng inogona kuuraya maseru ekenza uye ine simba rekudzivirira uye kurwisa gomarara. Panguva imwecheteyo, flavonoids iri muMaofeng ine madhigirii akasiyana eanorwisa gomarara in vitro, uye anogona zvakare kutora chinzvimbo mukudzivirira kenza uye anti-gomarara mhedzisiro.
5, antibacterial uye bacteriostatic
Iyo tii polyphenols uye tannins iri muMaofeng inogona kusimbisa hutachiona hweprotein uye kuuraya hutachiona. Inogona kushandiswa kurapa cholera, typhoid fever, dysentery, enteritis uye zvimwe zvirwere zvemudumbu. Iyo zvakare ine anti-kupisa uye bactericidal maitiro pane maronda eganda, ulceration uye purulent kuyerera. Uye zvakare, pakurapa kwekupupa kwemuromo, maronda, huro uye zvichingodaro kune imwe yekurapa maitiro.
6, kudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana
Zvemukati mevhitamini C uye tii polyphenols muMaofeng zvine hupfumi, zvine simba rekudzivirira kuberekana kwebhakitiriya, kushomeka kwemwaranzi, kudzivirira uye kurapa vascular sclerosis, kudzikisa ropa lipid uye kuwedzera masero machena eropa.
Pashure: GIZA REDU RURE JING
Zvadaro: GIZA REMAHARA BUDHI